Kismaayo News » Gunti Dhuuqsiga Ra’isulwasaaraha, halkee ka dabacsanyahay?
Gunti Dhuuqsiga Ra’isulwasaaraha, halkee ka dabacsanyahay?
Kn: Markaad dhinac walba ka eegto loolanka siyaasadeed ee dhaxmaraya Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Fadaraalka Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud iyo RW Cabdiwali Sheekh Axmed waxaa kuu soo baxaya hal natiijo oo ah in ay ciyaartani gabagabo tahay, kooxda madaxwaynuhuna kubbaddii ay ku laadin rabaan shabaqa RW.
Inkasta oo si gunti dhuuqsi ah ku jirto ay kooxda RW u ciyaarayaan, laakiin ciyaartoodu waxay ka javan tahay weerarka iyo difaaca. Waxa lasugaayo hadda waa in ciyaartu ay dhamaataa.
Ciyaartan siyaasadeed waxay hoos u dhigtay fursadihii siyaasadeed ee ay lahaayeen kooxda RW taageersanayd. Waxaana sabab u ah arrimahan soo socda:
1. Waxay hardankan siyaasadeed bilaabeen ayagoon helin xog dhab ah oo laxiriirta masraxa siyaasada iyo heerarka kala duwan ee siyaasadda soomaaliya marto, waa suura gal in ay heleen xog laakiin xogtaas mayna ahayn mid sax ah, ama isu dheelin tiran.
2. RW. Wuxuu soo saari jiray go,aamo si isdaba joog ah asaga oon latashan Madaxwayanaha, wuxuuna u muuqday in uu yahay nin si kaligiis wax u maroorsanaya, taasi oo ka taloowsan dhaqankii wada tashiga iyo isqadarinta ku dhisneyd maadaamaa dalka madax laga wadahay.
3. Kooxda RW. Mayna halkii ayaga oo og in kafada siyaasadda ay dhan kale u jiifto, ayay isku dayeen in ay la guriyaan kooxda madaxweynaha, mana aysan eegin tanta dalka iyo hiigsiga 2016-ka.
4. Majirin bisayl siyaasadeed, wayna muuqattaa ragga dagaalka siyaasadda hurinaya ee taageersan RW badankood masraxa siyaasadda way ku cusubyihiin
5. Waxay isku dayeen in ay jilaan siyaasadda ka jirta hadda Masar. Liibiya, Yeman, ee ah in ay ku shaabadeeyaan Madaxwayaha Jamhuuriyadda Soomaliya ee fadaraalka in uu ka tirsanyahay koox diimeed, Madaxwaynaha Soomaaliya wuxuu madaxwayne u yahay umadda soomaaliyeed oo dhan kaman tirsano koox gaar ah.
Arrimahan aan kor kusoo xusanay iyo kuwa kale oo isbiirsaday waxay soo dadajiyeen bamjaridda siyaasadda RW. Cabdiwali sheekh Axmed waxayna galisay mustaqbalkiisa siyaasadeed mugdi…
Waxaa xusid mudan in RW. Hore DR:Farmaajo uu kasbaday qalbiga shacabka Soomaaliyeed waqti yar gudahood, sababtuna waxay ahayd wuxuu layimid tanaasul siyaasadeed, wuxuuna soo bandhigaya cashir ka duwan midka maanta taagan.
Wararkii ugu danbeeyana waxay sheegayaa in mooshinkii lagu riddi lahaa RW.Cabdiwali uu xawli u socdo, iyo waliba in dagaalka hadda jira uu gaaray meel aan dib looga laaban Karin, sabab too ah Xukuumadan waxay lumisay Kalsoonidii xubanaha Baarlamaan, iyo Midda Madaxweynaha Jamhuuriyadda Fadaraalka Soomaaliya.
Hadalkan waxaan ku soo afmeerayaa in xukuumada hadda jirta ay ku guul daraysatay in dalka laga abuuro siyaasad dagan, si dadka iyo dalka loo samata bixiyo.
RW. Cusub maka faaiidaysan doonaa Cashirkan?
FG : Aragtidani waxa ay gaar u tahay qofka magaciisa ku saxiixan, mana loo qaadan karo aragtida Kn